Ultra Spearman Rank Correlation - MT5 Indicator သည်
နေအိမ် MT5 Indicator သည် Ultra Spearman Rank Correlation
SignalPeriod(ဂဏန်း) = StartLength + ဂဏန်း * လှမ်း
The value Number variable vary from0StepsTotal မှ. The resulting periods added to the arrays and used in calculation of the averaged values of SpearmanRankCorrelation indicator. လက်ရှိလမ်းကြောင်းသစ်ဦးတည်ချက်များ၏တွက်ချက်မှုအားလုံး signal ကိုလိုင်းများအတွက်ပျမ်းမျှလမ်းကြောင်းသစ်တန်ဖိုးများအပေါ်တွင်အခြေခံထားပါသည်.
နောက်ဆုံး, အဆိုပါခေတ်ရေစီးကြောင်း၏အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောတန်ဖိုးများကိုညွှန်ပြချက်လိုင်းများအဖြစ်ပျမ်းမျှနှင့်အသုံးပြုကြသည်, အရောင် Histogram အဖြစ်ပြသ, အဆိုပါ DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 ပုံဆွဲစတိုင်သုံးပြီးကြံစည်. Historgram အရောင်လမ်းကြောင်းသစ်ဦးတည်ချက်အပေါ်မူတည်, အဆိုပါ Histogram width ကိုအဆိုပါလမ်းကြောင်းသစ်၏အစွမ်းသတ္တိကိုအပေါ်မူတည်.
ညွှန်ပြချက်တန်ဖိုးများများအတွက် overbought နှင့် oversold အဆင့်ဆင့်အပြင်ဘက်မှောင်မိုက်အရောင်များကိုအသုံးပြုကြသည်. အဆိုပါ overbought / oversold တန်ဖိုးများများအတွက်အလင်းအရောင်များကိုအသုံးပြုကြသည်.
//| အညွှန်းကိန်း input ကို parameters တွေကို                   |
input ကို int  rangeN=14;
input ကို Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA;        // Smooth method
input ကို int StartLength=3;                        // Start length
input ကို int WPhase=100;                           // Phase
input ကို uint Step=5;                              // Period step
input ကို uint StepsTotal=10;                       // Steps total
input ကို Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA;    // Smooth method
input ကို int SmoothLength=3;                      // Smooth length
input ကို int SmoothPhase=100;                     // Smooth phase
input ကို uint UpLevel=80;                         // Overbought အဆငျ့ (in %)
input ကို uint DnLevel=20;                         // Oversold အဆငျ့ (in %)
input ကို color UpLevelsColor=Blue;                // Overbought level color
input ကို color DnLevelsColor=Blue;                // Oversold level color
input ကို STYLE Levelstyle=DASH_;                 // Level style
input ကို WIDTH  LevelsWidth=Width_1;             // Level width
SMA – ရိုးရှင်းသောရွေ့လျားနေသည့်ပျှမ်းမျှ;
မိခင် – အဆရွေ့လျားနေသည့်ပျှမ်းမျှ;
SMMA – ပန်းခင်းလမ်းရွေ့လျားပျှမ်းမျှ;
LWMA – ပျမ်းမျှအားရွေ့လျားတွက်ချက် linear;
JJMA – JMA သပ္ပါယ်ပျမ်းမျှ;
JurX – ချောချောမောမော ultralinear;
ParMA – parabolic ချောမွေ့;
T3 – Tillson ရဲ့မျိုးစုံကိုအဆချောမွေ့;
VIDYA – Tushar Chand ရဲ့ algorithm ကိုများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူချောမွေ့;
ဒါပေမဲ့ – ပယ်ရီ Kaufman ရဲ့ algorithm ကိုများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အတူချောမွေ့.
ဒါဟာ Phase1 နှင့် Phase2 parameters တွေကိုကွဲပြားခြားနားတဲ့ချောမွေ့ Algorithms အနေနဲ့လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပာယ်ကိုရှိသည်သောသတိပြုသင့်ပါတယ်. JMA သည်တစ်ဦးထံမှပြင်ပအဆင့် variable ကိုပြောင်းလဲဖြစ်ပါသည် -100 သို့ +100. T3 သည်အားဖြင့်များပြားစေတဲ့ချောမွေ့အချိုးအစားသည် 100 ပိုကောင်း visualization များအတွက်, VIDYA ကြောင့်တစ်ဦး CMO လှိုကာလသည်နှင့် AMA ကြောင့်နှေးကွေး EMA ကာလဖြစ်ပါသည်. အခြား algorithms တွင်ဤ parameters တွေကိုချောမွေ့ထိခိုက်ပါဘူး. AMA အစာရှောင် EMA ကာလအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ဖိုးကိုသည်နှင့်ညီမျှသည်2ပုံမှန်အားဖြင့်. အာဏာကိုမှမွေးမြူ၏အချိုးအစားလည်းညီမျှသည်2AMA များအတွက်.
အဆိုပါညွှန်ကိန်း SmoothAlgorithms.mqh စာကြည့်တိုက်အတန်းကိုအသုံးပြုသည် ( MQL5 Include အ terminal_data_folder ကူးယူရဦးမည်). ထိုအတန်းများအသုံးပြုမှုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဆောင်းပါးထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ခဲ့သည် “နောက်ထပ် Buffer အသုံးပြုခြင်းမရှိပါကအလယ်အလတ် Calculator များအတွက်စျေးနှုန်းစီးရီးပျမ်းမျှ”.
Ultra Spearman Rank Correlation isaMetatrader5(MT5) အညွှန်းကိန်းများနှင့် Forex ညွှန်ပြချက်၏အနှစ်သာရမှာစုဆောင်းသမိုင်းဒေတာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်.
ဒီအချက်အလက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီး, traders can assume further price movement and adjust their strategy accordingly.
Copy Ultra Spearman Rank Correlation.mq5 to your Metatrader Directory / ကျွမ်းကျင်သူများက / အညွှန်းကိန်းများ /
How to remove Ultra Spearman Rank Correlation.mq5 from your Metatrader5ဇယား?